Nin ajnabi ah oo khal-khal geliyay Garoonka Muqdisho oo Xabsiga Dhexe la dhigay
MUQDISHO, Somalia - Maxkamada gobolka Banaadir ayaa amar ku bixisay in Xabsiga Dhexe ee Muqdisho lagu sii hayo Antony Thomas Cox, kaasoo ay ciidamada amaanka ku qabteen 19-kii bishaan garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Muwaadinkaan udhashay wadanka Ingiriiska ayaa markii laga xiray madaarka caalamiga ah ee Aadan Cadde, waxaa laga shakiyay walax laga dhex-helay boorso watay taasoo loo maleeyay qarax.
Kadib baaritaan ay ku sameysay hay’addaha nabad-sugida iyo sirdoonka qaranka oo kiiskaan lagu wareejiyay ayaa lagu ogaaday in waxa la tuhmay ay tahay Gaaska Ilmada ka keentay Indhaha dadka.
Mr Cox o 48-sano jir ah, kaasoo haysta dhalashada Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa lagu eedeeyay inuu khal-khal geliyay amniga guud ee dalka iyo inaanu usheegin hay’adaha amniga walax laga shakiyay oo boorsadiisa laga helay.
Eedaysanaha ayaa wajahaya dacwad la xiriirta qodobka 332-531, taasoo ku xusun Xeerka Ciqaabta Soomaaliyeed, iyadda go’aanka ugu dambeeya ay gaari doonto maxkamada sare ee dalka.
Go'aanka maxkamada gobolka Banaadir ay kasoo saartay gal-dacwadeedka ayaa nan lagu caddeynin mudada uu xabsiga kusii jirayo Antony Thomas Cox.
Heshiiska Shirkada FAVORI ee Garoonka Muqdisho oo dib u eegis lagu sameynayo
Soomaliya 01.12.2018. 11:44
Shirkaddan oo laga leeyahay Turkiga ayaa waxay dalka timid xiligii dowladdii...
Taageerada Imaaraadka ee amniga Soomaaliya oo la siyaasadeeyay
Soomaliya 08.04.2018. 19:51
Booliska oo ka hadlay baqdinta amni ee Muqdisho
Soomaliya 13.11.2017. 22:08
Madixii Canshuuraha Dekadda Muqdisho Musuq-maasuq Maxkamad lasoo taagay
Soomaliya 29.09.2018. 22:59